2012 US Sarudzo Yemukati Yekushambadzira Maitiro | Martech Zone
Monday, May 7, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ikozvino zvave kuratidza kuti ivo vekumberi vari pachena (mwanakomana wangu weLibertarian aisazobvumirana), zvinoita sekunge misasa yese iri kugadzikana uye marongero epamhepo atanga! Iyo Whitehouse webhusaiti pachayo yakashandurwa kuita peji hombe rekumhara yekutora maemail kero, ichida kuti mushanyi abaye kuti asvike kune chero ruzivo:
Whitehouse yanga ichingogara ichiburitsa infographics… pa Chikwereti Chenyika, peturu mitengo, Uye kunyange mauto muIraq. Ini ndakanakidzwa kuti nzira idzi dzakagamuchirwa - asi zvakati nyadziswe kuti zvakamonyaniswa mukufarira manejimendi. Ini ndoda kuona mamwe infographics pane izvo zvisiri kufamba zvakanaka futi - uye imwe tsananguro yakatenderedza iyo kuedza kwekuzara pachena.
Webhusaiti yemushandirapamwe iri kusanganisa mamwe maitiro. Hupenyu hwaJulia, semuenzaniso, inoratidzira ruzivo rwemifananidzo iyo inotora mushanyi kuburikidza nemushandirapamwe unoshuvira kubatsira vakadzi muhupenyu hwavo hwese:
Kuburitsa ruzivo rwakadai kunouya nemutengo, hazvo, uye Hupenyu hwekuitwa kwaJulia hwakatsoropodzwa uye kutovakwazve - heino Hupenyu hwaJulia maererano neveLibertarians:
Mushandirapamwe waMitt Romney urikubatanidza matekinoroji azvino futi, ine infographics iyo inotangira kubva kuMiddle Class, Vechidiki, Hispanic infographics iyo inoratidza kutaridzika kwakasiyana pane hupfumi uye kukanganisa kwayo pazvikamu izvi. Zvakare, ivo vakapa ichi fananidzo che federal bhajeti:
VaRepublicans vachiri kuita kunge vanononoka pakutora kana zvasvika pakubatana chaiko nevanhu kuburikidza nevemasvikiro. Hupenyu hwaJulia hunogona kushoropodzwa, asi zvakare iri zano rinobatana zvakananga nemukadzi muvhoti uye rakakamurwa zvine hungwaru muboka rega rega rezera. Hupenyu hwaJulia hausi kuzochinja mavhoti evatsoropodzi… asi zvinogona kukanganisa vhoti yevateereri vakatarisirwa vanogona kunge vaine zvinetswa zvakafanana izvo zviri kuzivikanwa naMutungamiri Obama. Iyo haisi yakaipa zano.
Izvo zvakati - maonero angu akazara pamusoro pekutengesa kwekusarudzwazve kweMutungamiri Obama hakuratidzike kunge kwakakwenenzverwa senzira yake yekutanga yesarudzo. Ini ndakasimudza rurimi mumatama posvo (iyo yakawana vanhu vazhinji vakatsamwa), ndichibvunza kana Obama aive anotevera Vista zvinoenderana nebasa rinoshamisa ravakaita. Ini ndanga ndisiri kushoropodza Mutungamiri Obama - ini ndaive uye ndichiri kufadzwa nekukasira uye nekukwezva mushandirapamwe waakamhanya uyo wakabata kutarisisa kwevechidiki veAmerica uye vavhoti vanofamba.
Ini ndinotenda kune matauriro akasiyana zvakanyanya kune yazvino sarudzo yekushambadzira zano. Haisisina tariro imwechete yekutarisira. Tichifunga nezve makore mashoma apfuura ehupfumi hunotyisa uye kushandisa kwakanyanya, matauriro acho akaremberera… ane zvakati wandei zvekutenderera panhamba, kunyanya kukurudzirwa kwezvakanaka, uye matani ezvikonzero zvezvakaipa. Handisi kuti mushandirapamwe wakashata - ingori toni yakasarudzika kupfuura yekutanga. Tichaona izvo zvinogadzira, zvakadaro! Tichitarisira kumberi kwakawanda kushambadzira zvemukati kune ese mapato anobatanidzwa!
CHERECHEDZA: Zvematongerwo enyika zvinogara zvichinetsa kuvhara pa a kushambadzira blog uye, kunyangwe paine kuyedza kwese, ndine chokwadi chekuti imi vari vatsigiri vanoshingairira mukwikwidzi mumwe nemumwe vachatsoropodza kufukidzwa kwangu pano. Ini handisi kuyedza kushambidza chero munhu kana kutsigira chero munhu - ingo taura nezve marongero ari kuiswa. Ndokumbirawo chengetai trolling yenyu yevavhoti uye mamwe masayiti ezvematongerwo enyika.